Kushambadzira Kuita Hunhu: 4 Mazano eKubudirira Nheyo | Martech Zone
Kushambadzira Kuita Hunhu: 4 Mazano eKubudirira Nheyo
Chipiri, Zvita 13, 2016 China, December 15, 2016 Douglas Karr
Kuzvifananidza ndiko kutsamwa kwese izvozvi asi iri zano rinogona kunyomba kana rikaitwa zvisirizvo. Ngatitorei muenzaniso wakajairika - unonzwa sei kana iwe ukawana email meseji painovhura, Anodiwa %%Zita rokutanga%%… Handizvo zvakanyanya? Nepo iwo uri muenzaniso uri pachena, izvo zviri pachena zviri kutumira zvisina basa uye zvemukati kunharaunda yako. Izvo zvinoda hwaro uripo.
Zvakafuma, zvine simba, zvakasarudzika-zvakanangwa zviitiko zvinoita kuti hupenyu huve nyore kune vatengi uye kuwedzera kushanda kwekushambadzira kushandisa kumakambani Ndizvozvo kukunda-kuhwina kune wese munhu.
Iyi infographic kubva kuMDG Kushambadzira inofamba kuburikidza nedatha kubva kuAdobe, Aberdeen Boka, Adlucent uye zvimwe zvakati wandei zvidzidzo zvinopfupikisa 4 nheyo dzakakosha dzebudiriro.
Vakangwara vachipesana nemaitiro mbeveve: Kuita kwako munhu kunoreva zvakawanda kupfuura kungoita kusanganisira zita. Kuita kwekutanga hakuna zvakunokanganisa pakubata; zvisinei, mameseji anobva pane chaiwo mushandisi zviito ane 2X yakavhurika mwero uye 3X tinya rate uchienzaniswa nema standard maemail Dzidza kusimba kwekutarisa ndicho chinhu chaicho chekuita zvinobatika.
Maonero ega emutengi: Vashandisi vanoti mabhenefiti epamusoro ekushandurwa ndeashoma asina shambadziro kushambadzira / meseji, kukurumidza kuwanikwa kwezvinhu zvitsva / masevhisi, uye kudyidzana kwekutenga kwepamusoro Kuti ununure zviitiko izvi uye usunge simba rekutarisa iwe unoda kupfuma, kugara uchigadzirisa maprofayili evatengi. Ziva kuti nei kuva nemaonero imwechete mutengi iri hwaro hwebudiriro.
Dhata uye masisitimu: Kuita munhu uye data / masisitimu haangobatanidzwe, akanyatsobatana. Pakati pevashambadzi avo vanoti havaite zvemukati, 59% vanoti chipinganidzo chikuru tekinoroji uye 53% vanoti havana data rakakodzera. Ongorora mashandisiro anoita mari mumapuratifomu akakodzera uye vanhu vanogona kubhadhara zvakanyanya.
Kujeka uye chengetedzo: Vanhu vanoramba vakangwarira kuita zvemunhu nekuti havana chokwadi chekuti data riri kushandiswa nekuchengetwa sei. Ndicho chikonzero kutonga uye chengetedzo zvakakosha kwazvo. Vamwe 60% vevashandisi vepamhepo vanoda kuziva kuti webhusaiti inosarudza sei zvemukati zvakagadzirirwa ivo uye 88% yevatengi vanosarudza kuona mashandisiro avo data ravo. Nzwisisa maitiro ekugadzirisa zvakanaka zvinonetsa izvi.
Kuti uzive maitiro ekushandisa zvakanyanya aya maitiro echako chako, tarisa 4 Matanho ekuvhura iyo Chaiyo Simba reKushambadzira Kuita kwako.
Tags: maonero evatengikuwanikwa kwedataData Securitykujekesa kwedatamdg kushambadzaPersonalizationpersonalization datachibatisoPachena
Kushambadzira Mamiriro Kubva kuGehena - Matani Evatungamiriri, Asi Hapana Kutengesa
Wepamusoro mashanu Makanganiso Ekudzivirira muKushambadzira kweMagetsi